आईप्याड ब्याट्री समस्याहरु? यहाँ छ के गर्ने जब यो छिटो चलाउँदछ! - आईफोन
सेतो मकड़ी को प्रतीक के हो?
युनिकोर्न बाइबल मा उल्लेख छ
netflix मेरो ipad मा खेल्दैन
मेरो फोन भन्छ कि यो चार्ज छ तर यो प्लग इन छैन
आईप्याड ब्याट्री समस्याहरु? यहाँ छिटो हुन्छ जब के गर्न को लागी छ!
तपाईंको आईप्याड ब्याट्री छिटो ड्रेन गर्दछ र किन पक्का हुनुहुन्न किन। तपाईंले आफ्नो आईप्याडको लागि धेरै भुक्तान गर्नुभयो, त्यसैले निराश हुन सक्दछ जब यसको ब्याट्री प्रदर्शन दर्शनीय भन्दा कम हुन्छ। यस लेखमा, म गर्नेछु आईप्याड ब्याट्री समस्याहरू कसरी ठीक गर्ने भन्ने बारे सुझाव दिनुहोस् !
किन मेरो आईप्याड ब्याट्री Drain छिटो हुन्छ?
धेरै जसो तपाइँको आईप्याड ब्याट्री छिटो हुन्छ, यो समस्या सामान्यतया सफ्टवेयरसँग सम्बन्धित हुन्छ । धेरै व्यक्तिले तपाईंलाई बताउनेछन् कि ब्याट्री प्रतिस्थापन गर्नु आवश्यक छ, तर त्यो सहि कहिले पनि साँचो हुँदैन। यो लेखले आईप्याड ब्याट्री समस्याहरू ठीक गर्नका लागि सेटि optimहरू कसरी अनुकूलित गर्ने भन्ने देखाउनेछ!
मोशन कम गर्नुहोस् खोल्नुहोस्
मोशन अन गर्नुहोस् अनन-एनिमेसनहरूमा कटौती गर्दछ जुन स्क्रिनमा हुन्छ जब तपाईं आफ्नो आईप्याड प्रयोग गर्नुहुन्छ। यी एनिमेसनहरू हुन् जुन घट्ने बित्तिकै र अनुप्रयोगहरू खोल्दा, वा जब पप-अपहरू स्क्रिनमा देखा पर्दछ।
मसँग आईफोन र आईप्याडमा मोशन सेटअप छ। म तपाईलाई आश्वस्त गर्न सक्छु कि तपाईले भिन्नतालाई ध्यान दिनुहुन्न।
कुन आईफोनको सबैभन्दा लामो ब्याट्री लाइफ छ
मोशन कम गर्न अन गर्न, जानुहोस् सेटिंग्स -> पहुँच -> गति -> गति कम गर्नुहोस् र मोशन रिडुसनको छेउमा स्विच खोल्नुहोस्। तपाइँ स्विच हरियो हुँदा मोशन कम छ थाहा छ।
स्वत: लक खोल्नुहोस्
अटो-लक एक सेटिंग हो जुन स्वचालित रूपमा केही मिनेट पछि आईप्याडको प्रदर्शन बन्द गर्दछ। यदि स्वत: लकमा सेट गरिएको छ कहिले पनि हुँदैन , तपाईंको आईप्याड ब्याट्री धेरै छिटो ड्रेन गर्न सक्दछ किनकि प्रदर्शन सँधै यसको साथ रहनेछ जब सम्म तपाईं यसलाई लक गर्नुहुन्न।
अटो-लक खोल्न, यहाँ जानुहोस् सेटिंग्स -> प्रदर्शन र चमक -> स्वत: लक । त्यसोभए, कहिले पनि विकल्प नखोज्नुहोस्। मैले मेरो आईप्याड Auto मिनेट पछि अटो-लकमा सेट गरेको छु किनकि यो त्यो गोल्डिलक्स क्षेत्रमा छोटो वा धेरै लामो छैन।
नोट: यदि तपाईं भिडियो स्ट्रिमिंग अनुप्रयोग जस्तै नेटफ्लिक्स, हुलु, वा यूट्यूब प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंको आईप्याडले आफैलाई लक गर्दैन, स्वत: लक भने पनि चालू छ!
तपाईंको आईप्याडमा अनुप्रयोगहरू बन्द गर्नुहोस्
एप्पल उत्पादनहरूको विश्वमा अनुप्रयोगहरूबाट बन्द गर्नु एक विवादास्पद विषय हो। हामीले परीक्षण गर्यौं अनुप्रयोगहरू बन्द हुने प्रभाव आईफोनहरूमा, र हामीले पत्ता लगायौं कि यसले तपाईंलाई ब्याट्रीको जीवन बचाउन मद्दत गर्दछ!
तपाईंको आईप्याडमा अनुप्रयोगहरू बन्द गर्न होम बटनमा दुई पटक क्लिक गर्नुहोस्। यसले अनुप्रयोग स्विचर खोल्छ। एउटा अनुप्रयोग बन्द गर्न, यसलाई माथि स्वाइप गर्नुहोस् र स्क्रिनको माथिबाट।
साझेदारी आईप्याड एनालिटिक्स बन्द गर्नुहोस्
जब तपाईं पहिलो पटक आईप्याड सेट अप गर्नुहुन्छ, तपाईंलाई एप्पलसँग एनालिटिक्स डाटा साझा गर्न वा नपार्ने भनेर सोधिन्छ। तपाईले यो जानकारी एप्पलसँग बाँड्न सहमत हुनु भएको छ किनकि तपाईले पहिलो पटक तपाईको नयाँ आईप्याड उत्सुकताका साथ सेट अप गर्नु भएको थियो।
जब आईप्याड एनालिटिक्स सेयर हुन्छ, तपाईको आईप्याडमा भण्डारित केही प्रयोग र निदान जानकारी एप्पलसँग साझेदारी गरिन्छ, जसले उनीहरूको उत्पादन र सेवाहरू सुधार गर्न मद्दत गर्दछ। सेयर आईप्याड एनालिटिक्सले यसको ब्याट्री जीवन निकाल्न सक्छ किनभने यो पृष्ठभूमिमा निरन्तर चलिरहेको छ र एप्पललाई जानकारी पठाउँदा सीपीयू पावर प्रयोग गर्दै।
जब तपाईं साझेदारी आईप्याड एनालिटिक्स बन्द गर्नुहुन्छ, तपाईं एप्पललाई उनीहरूको उत्पादनहरू सुधार गर्न मद्दत गर्नुहुने छैन, तर तपाईं ब्याट्री जीवन बचत गर्नुहुनेछ।
साझेदारी आईप्याड एनालिटिक्स बन्द गर्न, जानुहोस् सेटिंग्स -> गोपनीयता -> एनालिटिक्स र आईप्याड एनालिटिक्स साझेदारी गर्नुहोस् पछि स्विच बन्द गर्नुहोस्। तपाईं यहाँ छँदा, आईक्लाउड एनालिटिक्स साझा गर्न को लागी अर्को स्विच बन्द गर्नुहोस्। यो आईप्याड एनालिटिक्स जस्तै छ, केवल आईक्लाउडको बारेमा जानकारीको लागि।
अनावश्यक सूचनाहरू बन्द गर्नुहोस्
सूचनाहरू सतर्कताहरू हुन् जुन तपाईंको आईप्याड होम स्क्रिनमा देखा पर्दछ जब अनुप्रयोगले तपाईंलाई सन्देश पठाउन खोजी गर्दछ। उदाहरणको लागि, सन्देश अनुप्रयोगले तपाईंलाई एउटा सूचना पठाउँदछ जब तपाईं नयाँ पाठ सन्देश वा iMessage प्राप्त गर्नुहुन्छ।
जहाँसम्म, तपाईले प्रत्येक अनुप्रयोगबाट सूचनाहरू प्राप्त गर्नु आवश्यक पर्दैन, अनुप्रयोगहरू जस्तै तपाईले धेरै जसो प्रयोग गर्नुहुन्न। एकै साथ, तपाईं अधिसूचनाहरू बन्द गर्न चाहनुहुन्न तपाईका सबै अनुप्रयोगहरू , किनभने तपाईं सायद जान्न चाहानुहुन्छ जब तपाईंसँग नयाँ सन्देश वा ईमेल छ।
भाग्यवस, तपाईं कुन अनुप्रयोगहरूमा गएर तपाईंलाई सूचनाहरू पठाउन अनुमति दिइएको छनौट गर्न सक्नुहुन्छ सेटिंग्स -> सूचनाहरू । यहाँ तपाईं आफ्नो आईप्याडमा सबै अनुप्रयोगहरूको सूची देख्नुहुनेछ जुन सूचनाहरू पठाउन सक्षम छन्।
तल सूचीमा भाग्नुहोस् र आफैलाई सोध्नुहोस्, 'के मैले यस अनुप्रयोगबाट सूचनाहरू प्राप्त गर्नु आवश्यक छ?' यदि उत्तर होईन भने, अनुप्रयोगमा ट्याप गर्नुहोस् र सूचनाहरूलाई अनुमति दिनुहोस् पछिल्लो स्विच बन्द गर्नुहोस्।
अनावश्यक स्थान सेवाहरू बन्द गर्नुहोस्
स्थान सेवाहरू केहि अनुप्रयोगहरूको लागि उत्कृष्ट हो, उदाहरणका लागि मौसम अनुप्रयोग। जब तपाइँ यसलाई खोल्नुहुन्छ, तपाइँ तपाइँ कहाँ हुनुहुन्छ भनेर जान्न चाहानुहुन्छ, ताकि तपाइँ आफ्नो शहर वा शहरको मौसमको बारेमा जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। यद्यपि त्यहाँ केहि अनुप्रयोगहरू छन् जुन वास्तवमा स्थान सेवाहरूको आवश्यक पर्दैन, र तपाईं यसलाई बन्द गरेर ब्याट्री जीवन बचत गर्न सक्नुहुनेछ।
जाऊ त्यहाँ सेटिंग्स -> गोपनीयता -> स्थान सेवाहरू स्थान सेवाहरू समर्थन गर्ने सबै अनुप्रयोगहरूको सूची हेर्न। स्क्रिनको शीर्षमा मास्टर स्विच प्रयोग गर्न सिफारिस गर्दिन किनकी तपाई आफ्नो केही अनुप्रयोगहरूको लागि स्थान सेवाहरू छोड्न चाहानुहुन्छ।
यसको सट्टामा, तपाइँको अनुप्रयोगहरूको सूची एक एक गरेर तल जानुहोस् र निर्णय गर्नुहोस् कि तपाइँ स्थान सेवाहरू छोड्नुहोस् वा चाहनुहुन्न। स्थान सेवाहरू बन्द गर्न, अनुप्रयोगमा ट्याप गर्नुहोस् र ट्याप गर्नुहोस् कहिले पनि हुँदैन ।
यदि तपाईं अनुप्रयोगमा पूर्ण रूपमा स्थान सेवाहरू असक्षम गर्न चाहनुहुन्न, तर तपाईं केही ब्याट्री जीवन बचत गर्न चाहानुहुन्छ, ट्याप गर्नुहोस् अनुप्रयोग प्रयोग गर्दा यसको मतलब भनेको स्थान सेवाहरू मात्र सक्षम हुन्छन् जब तपाईं वास्तवमै अनुप्रयोग प्रयोग गरिरहनु भएको छ सट्टामा।
विशिष्ट प्रणाली सेवाहरू अक्षम गर्नुहोस्
जब तपाईं स्थान सेवाहरूमा हुनुहुन्छ, स्क्रिनको तल प्रणाली सेवाहरूमा ट्याप गर्नुहोस्। यहाँ सबै कुरा बन्द गर्नुहोस् कम्पास क्यालिब्रेसन बाहेक, आपतकालीन SOS , मेरो आईप्याड खोज्नुहोस्, र समय क्षेत्र को सेटिंग।
अर्को, महत्वपूर्ण स्थानहरूमा ट्याप गर्नुहोस्। यो सेटिंगले तपाईं प्राय: अवस्थित अवस्थित स्थानहरूको बारेमा जानकारी बचत गर्दछ। यो एक पूर्ण अनावश्यक आईप्याड ब्याट्री ड्रायर हो, त्यसैले स्विच ट्याप गर्नुहोस् र यसलाई बन्द गर्नुहोस्।
पुशबाट ल्याउनका लागि मेल स्विच गर्नुहोस्
यदि तपाईं आफ्नो आईप्याडमा धेरै ईमेल गर्नुहुन्छ, यसको मेल सेटिंग्स यसको ब्याट्री जीवनमा सबैभन्दा ठूलो ड्रेन हुन सक्छ। आईप्याड ब्याट्री समस्या हुन सक्छ जब तपाईंको आईप्याड ल्याउन को सट्टा Push मा सेट छ।
जब पुश मेल खुल्ला हुन्छ, तपाईंको आईप्याडले तपाईंलाई सूचना पठाउँदछ तपाईंको इनबक्समा नयाँ ईमेल आउने बित्तिकै। राम्रो, सही लाग्छ? त्यहाँ एक मात्र समस्या छ - जब मेल पुश गर्न सेट हुन्छ, तपाईको आईप्याड हो लगातार तपाईंको ईमेल इनबक्समा पिंग गर्दै र केहि पनि नयाँ छ कि छैन भनेर जाँच गर्न। ती स्थिर पिंगहरूले तपाईंको आईप्याडको ब्याट्री जीवनलाई गम्भीरताका साथ निकाल्न सक्छन्।
समाधान पुशबाट फेचमा मेल स्विच गर्नु हो। तपाईको इनबक्समा निरन्तर पिंग गर्नु भन्दा तपाईको आईप्याड केवल केही मिनेटमा एक पटक मात्र मेलका लागि ल्याउनेछ! तपाईका इ-मेलहरू आउँदैनन्, तर दोस्रो पटक आउँछ, तर तपाईंको आईप्याडको ब्याट्री तपाईंलाई धन्यवाद दिनेछ। तपाईंको आईप्याडले स्वचालित रूपमा नयाँ ईमेलहरू पनि ल्याउँदछ जुन तपाईंले आफ्नो मनपरेको ईमेल अनुप्रयोग खोल्नुभयो!
तपाईंको आईप्याडमा पुशबाट ल्याउन मेल स्विच गर्न सेटिंग्स खोल्नुहोस् र ट्याप गर्नुहोस् खाता र पासवर्ड -> नयाँ डाटा ल्याउनुहोस् । पहिले, पुशको छेउमा स्क्रीनको शीर्षमा स्विच बन्द गर्नुहोस्।
अर्को, स्क्रिनको तल फेच तालिका चयन गर्नुहोस्। म १ 15 मिनेट सिफारिस गर्दछु किनकि यो महत्वपूर्ण ब्याट्री जीवन धान्न बिना नै तपाईंको ईमेल छिटो प्राप्त गर्ने बीचमा राम्रो सन्तुलन हो।
निश्चित अनुप्रयोगहरूको लागि पृष्ठभूमि अनुप्रयोग रिफ्रेस बन्द गर्नुहोस्
पृष्ठभूमि अनुप्रयोग रिफ्रेस सुविधा हो जुन पृष्ठभूमिमा नयाँ डेटा डाउनलोड गर्दछ जब तपाईं यसलाई प्रयोग गर्नुहुन्न भने पनि। त्यस तरीकाले जब तपाईं अनुप्रयोग फेरि खोल्नुहुन्छ, यसका सबै जानकारीहरू अप-टु-डेटमा हुनेछन्! दुर्भाग्यवस, यो तपाईंको आईप्याडको ब्याट्री जीवनमा प्रमुख नाली हुन सक्छ किनकि तपाईंको अनुप्रयोगहरू पृष्ठभूमिमा निरन्तर चलिरहन्छ र नयाँ जानकारी डाउनलोड गर्दै।
मेरो नोट आईफोन मा मेटाइयो
पृष्ठभूमि अनुप्रयोग रिफ्रेस अफ गर्दै अनुप्रयोगहरूका लागि जहाँ तपाईंलाई आवश्यक पर्दैन धेरै आईप्याड ब्याट्री जीवन बचत गर्न सजिलो तरीका हो। जाऊ त्यहाँ सेटिंग्स -> सामान्य -> ​​पृष्ठभूमि अनुप्रयोग रिफ्रेस । पहिलेका चरणहरूमा जस्तै, म मास्टर स्विच प्रयोग गर्न सिफारिस गर्दैन किनकि त्यहाँ केही अनुप्रयोगहरू छन् जहाँ पृष्ठभूमि अनुप्रयोग रिफ्रेस वास्तवमै उपयोगी छ।
तपाईंको अनुप्रयोगहरूको सूची तल जानुहोस् र आफैलाई सोध्नुहोस्, 'के म यो अनुप्रयोग लगातार पृष्ठभूमिमा चल्न र नयाँ सामग्री डाउनलोड गर्न चाहन्छु?' यदि उत्तर होईन भने, पृष्ठभूमि अनुप्रयोग रिफ्रेस बन्द गर्न अनुप्रयोगको दायाँ तिर स्विच ट्याप गर्नुहोस्।
तपाईंले प्रयोग नगर्ने विजेटहरू हटाउनुहोस्
विजेटहरू तपाईको आईप्याडको गृह स्क्रिनको टाढा बाँया पट्टि 'मिनी-अनुप्रयोगहरू' हुन् जसले अनुप्रयोगको भित्र के भइरहेको छ भन्ने बारे जानकारीको सानो स्निपेट्स दिन्छ। विजेटहरू भर्खरका समाचार हेडलाइहरू पढ्न, मौसम जाँच्न, वा तपाईंको एप्पल उपकरणहरूले कति ब्याट्री जीवन छोडेको हेर्नको लागि उत्कृष्ट छ।
यद्यपि अधिकांश व्यक्तिहरू नियमित रूपमा उनीहरूको विजेटहरू जाँच गर्दैनन् वा तपाईको आईप्याडमा स्वचालित रूपमा सेट अप हुनेहरू प्रयोग गर्दैनन्। यी विजेटहरू निरन्तर तपाईंको आईफोनको पृष्ठभूमिमा चल्दछन् ताकि जब तपाईं कुनै पहुँच गर्न चाहानुहुन्छ, उनीहरूले प्रदर्शन गरेको जानकारी अप टु डेट छ। तपाईंले प्रयोग नगर्ने विजेटहरू बन्द गरेर, तपाईं आईप्याड ब्याट्री जीवन बचत गर्न सक्नुहुनेछ!
पहिले, विजेट पृष्ठमा पुग्नको लागि तपाइँको आईप्याडको गृह स्क्रिनमा बाँया देखि दायाँ स्वाइप गर्नुहोस्। तल सबै तिर स्क्रोल गर्नुहोस् र गोलाकार ट्याप गर्नुहोस् सम्पादन गर्नुहोस् टांक।
अब तपाइँ सबै विजेटहरूको सूची देख्नुहुनेछ जुन तपाइँ आफ्नो आईप्याडको गृह स्क्रिनबाट थप्न वा हटाउन सक्नुहुन्छ। एउटा विजेट मेट्नको लागि, यसको बाँयामा रातो माइनस बटन ट्याप गर्नुहोस्, त्यसपछि ट्याप गर्नुहोस् हटाउनुहोस् ।
iphone xs बन्द छैन
तपाईको आईप्याड कम प्रति हप्ता एक पटक बन्द गर्नुहोस्
कम्तिमा हप्तामा एक पटक तपाईको आईप्याड बन्द गर्नाले यसको ब्याट्री जीवन विस्तार गर्ने सजिलो तरीका हो। यदि तपाईं आईप्याड ब्याट्री समस्या अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ, यो सम्भव छ लुकेको सफ्टवेयर मुद्दा नालीको मुख्य कारण हो।
तपाइँको आईप्याड बन्द गर्नाले यसको सबै कार्यक्रमहरू प्राकृतिक रूपमा बन्द गर्न अनुमति दिँदछ। जब तपाइँ तपाइँको आईप्याड पछाडि खोल्नुहुन्छ, यसले पूर्ण रूपमा ताजा सुरूवात हुनेछ!
तपाईंको आईप्याडलाई चिसो तापक्रममा राख्नुहोस्
आईप्याड effectively२ - degrees degrees डिग्री फरेनहाइटको बीचमा प्रभावी रूपमा सञ्चालनको लागि डिजाइन गरिएको हो। जब तपाईंको आईप्याड त्यस दायराबाट बाहिर जान थाल्छ, चीजहरू गलत हुन सक्छन् र तपाईंको आईप्याड खराबी हुन सक्छ। अझ खराब, यदि तपाइँको आईप्याड समय अवधिको लागि धेरै तातो भयो भने, यसको ब्याट्री स्थायी रूपमा बिगार्न सक्छ।
यदि तपाइँको आईप्याड समय समय मा गरम हुन्छ, ब्याट्री शायद ठीक हुनेछ। जहाँसम्म, यदि तपाई गर्मीको घाममा तपाईको आईप्याड छाड्नुहुन्छ वा तातो कारमा सारा दिन बन्द छ भने तपाईले ब्याट्रीलाई स्थायी रूपमा क्षति पुर्‍याउने जोखिम चलाउनुहुन्छ।
DFU तपाइँको आईप्याड पुनर्स्थापना गर्नुहोस्
एकचोटि तपाईंले माथिका सबै सुझावहरू लागू गर्नुभयो, एक हप्ता लिनुहोस् र हेर्नुहोस् यदि तपाईंको आईप्याड ब्याट्री समस्या समाधान भयो। यदि होईन भने, त्यहाँ गहिरो सफ्टवेयर मुद्दा हुन सक्छ जुन सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।
यदि तपाइँको आईप्याड ब्याट्री अझै पनी छिटो निकास जारी छ यदि तपाइँ हाम्रो सुझावहरु को उपयोग पछि तपाइँको आईप्याडलाई DFU मोडमा राख्नुहोस् र एक बाट पुनर्स्थापना
मर्मत र प्रतिस्थापन विकल्पहरू
यदि तपाईं आईप्याड ब्याट्री समस्या अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ तपाईंले यसलाई DFU मोडमा राख्नु भए पछि वा पूरै मेट्नुभयो भने, त्यहाँ हार्डवेयर समस्या हुन सक्छ। म तपाइँको आईप्याड तपाइँको स्थानीय एप्पल स्टोर मा लिन र तिनीहरूलाई एक मानक ब्याट्री परीक्षण प्रदर्शन गर्न को लागी यसलाई बदल्न आवश्यक छ कि भनेर सिफारिस गर्दछु।
यदि तपाईंको आईप्याड ब्याट्री परीक्षण असफल हुन्छ र तपाईंको आईप्याड एप्पलकेयर + द्वारा कभर गरिएको छ भने, एप्पलले ब्याट्रीलाई अन-द-स्थानमा बदल्नुहोस्। जहाँसम्म, यदि तपाईंको आईप्याड ब्याट्री टेस्ट पास गर्दछ, एक राम्रो राम्रो मौका छ एप्पलले ब्याट्री प्रतिस्थापन गर्दैन, तपाईंसँग एप्पलकेयर + छ भने पनि।
यदि तपाईंको आईप्याड एप्पलकेयर + द्वारा सुरक्षित गरिएको छैन, वा यदि तपाईं भर्खरै नयाँ आईप्याड ब्याट्री प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ भने हामी सिफारिस गर्दछौं। नाडी , एक मा मांग आईप्याड र आईफोन मरम्मत कम्पनी। पल्सले तपाईंको घर, कार्यस्थल, वा मनपर्दो कफि शपमा प्रमाणित टेक्नीशियन पठाउँदछ। तिनीहरूले तपाईंको आईप्याडको ब्याट्री ठीक ठाउँमा हाल्नेछ र तपाईंलाई जीवनभर ग्यारेन्टी दिनेछ!
आईप्याड ब्याट्री समस्या: समाधान भयो!
म आशा गर्दछु कि तपाईं यी सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न सक्षम हुनुहुनेछ र तपाईंको आईप्याडको ब्याट्री जीवन सुधार गर्न सक्नुहुनेछ। म तपाईलाई परिवार र साथीहरूलाई आईप्याड ब्याट्री समस्या समाधान गर्न मद्दतको लागि यी सुझावहरू सामाजिक मिडियामा साझेदारी गर्न प्रोत्साहित गर्दछु। मलाई तल टिप्पणी दिनुहोस् तल कुन टिप तपाईंको मनपर्ने थियो र तपाईंको आईप्याडको ब्याट्री जीवनमा कति सुधार आएको छ!